ल्याप्टप नै को घटक कसरी इकट्ठा गर्न: विशेषज्ञ सल्लाह
हालै, व्यक्तिगत कम्प्युटर र ल्याप्टप बढी र थप मालिकहरूले वास्तवमा ध्यान आकर्षित आधुनिक ग्याजेटहरू सधैं व्यक्तिगत आवश्यकताहरू पूरा नगर्ने: पर्याप्त छैन हार्ड डिस्क क्षमता, स्मृति धेरै कम छ, भिडियो कार्ड सबैभन्दा रोचक खेल को लोड सामना गर्न सक्दैन, ठंडा देखिने परिणाम दिन छैन आदि
यस्तो क्षणमा मा, धेरै कसरी hardier गर्न अनुपयुक्त भागहरु प्रतिस्थापन गर्न सोचिरहेका छन्। तर यो, को पाठ्यक्रम, महंगा बन्नेछ। पीसी मालिक लामो यो समस्या हल छन्: पुरानो भवन यसलाई प्रतिस्थापित मा। टेक्नीसियन को उपयुक्त घटक देखि कम्प्युटर सङ्कलन। तिनीहरूले सही Motherboard र चयन गर्न पर्याप्त छ सीपीयू, र त्यसपछि सम्झौता बजेट पछि छ। तर आफ्नो पीसी स्पष्ट छ भने, कसरी सामान देखि ल्यापटप संकलन गर्न?
सबै पीसी घटक आवास मा फिट गर्न सजिलो हो, तर आफ्नो हात संग ल्यापटप विधानसभा संग Tinker छ। सबै घटक दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
कुञ्जी, उपकरण मा संचालित छ जो बिना।
दोस्रो, जो उपकरणको सञ्चालन असर छैन।
Motherboard र सीपीयू
सबै को पहिलो, तपाईं ल्यापटप को घटक को सबै भन्दा इकट्ठा अघि, तपाईं Motherboard र प्रोसेसर को मुद्दा उठाउनु पर्छ। पहिलो हामी केन्द्रीय एकाइ को प्रकार निर्धारण गर्न आवश्यक छ। विभिन्न संस्करण नै प्रोसेसर को निर्माता को वेबसाइट मा पाउन सकिन्छ। विशेषताहरु चयन आवश्यक निम्न मापदण्ड अनुसार: आवृत्ति, कोर संख्या, अधिकतम स्मृति, आदि तपाईं पनि आवश्यकता आंकडा बाहिर के प्रोसेसर सकेट र, सुरु देखि यो जानकारी, चुन्नुहोस Motherboard। यसलाई केही motherboards लागि ग्राफिक्स कार्ड अतिरिक्त स्थान संग सुसज्जित छैन, र मात्र एकीकृत काम टिप्पण लायक छ। यस मामला मा, तिनीहरूले खेलाडीहरूको लागि उपयुक्त हो।
एक ल्याप्टप घटक को सबै भन्दा निर्माण गर्ने बारे एउटा प्रश्न गर्न जवाफ, यो ग्राफिक्स कार्ड बेवास्ता गर्न असम्भव छ। Motherboard र सीपीयू, यो घटक नोटबुक लागि अत्यावश्यक छ। क्षणमा, उत्कृष्ट GPUs केही NVIDIA को उपकरण हुन मानिन्छ। निर्माता को Flagships पनि सबैभन्दा आधुनिक खेलाडीहरूलाई को आवश्यकताहरू पूरा। आधिकारिक वेबसाइट फेला पार्न र चयन गरिएको GPU लागि चालक डाउनलोड गर्न सजिलो छ।
तर यो मूल्य छैन को विकल्प संग हतार। सुरु लागि Motherboard यो उपकरण समर्थन भने जाँच हुनेछ। यो खोज इन्जिन मोडेल "Motherboard" र GPU थप्न पर्याप्त छ।
सेवा केन्द्र वा आत्म-सिकाउनुभयो ईन्जिनियरहरु को धेरै कर्मचारीहरु स्मृति महत्त्व बुझाउने घण्टा समर्पित गर्न सक्नुहुन्छ। क्षतिग्रस्त पट्टा प्रोसेसर र प्रणाली सुरु हुनेछ। ल्याप्टप घटक को सबै भन्दा सङ्कलन गर्न कसरी प्रश्न, यो सही स्मृति चयन गर्न मात्र होइन, तर पनि आफ्नो आवाज निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
यो छनोट सीपीयू र आधिकारिक वेबसाइटमा यसो जानकारी को विशेषताहरु आधारित छ। उदाहरणका लागि, माथि 8 गिगाबाइट गर्न DDR3 को समर्थन DDR4 स्मृति प्रकार र मात्रा 16 जीबी मा सेट गर्न सकिन्छ। ल्यापटप काम गर्नेछ, तर गलत तरिकाले। ल्यापटप घटक को गुणस्तर सङ्कलन गर्न प्रोसेसर द्वारा समर्थित छ जो स्मृति को आवृत्ति पत्ता लगाउन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, 1600 मेगाहर्ट्ज। 1333 मा एक स्मृति पट्टी छनौट गर्दा यो आफ्नो पूर्ण गति मा काम गर्नेछ। तर आवृत्ति उच्च छ भने (जस्तै, 1866), अतिरिक्त 226 मेगाहर्ट्ज प्रयोग गरिन्छ।
अर्को, तपाईं Motherboard मा स्थित स्मृति लागि कति स्लट जान्नु आवश्यक: एक वा दुई। आफ्नो नम्बर को कोष्ठक हुनेछ कति निर्भर गर्दछ। प्रोसेसर 16 जीबी को लागि "राम" समर्थन, र Motherboard दुई स्लट छ भने, दुई स्ट्रिप्स विस्तार को लागि कोठा छोडेर गर्दा, 8 जीबी वा 16 जीबी लागि खरिद गर्न सकिन्छ।
ल्याप्टप को घटक कसरी इकट्ठा गर्न जान्न, त्यहाँ जानकारी धेरै छ। र जताततै ठंडा सिस्टम मा डाटा समावेश गर्दछ। किरा यस प्रकारको पनि मद्दत गर्छ, प्रमुख लागू गर्ने ल्यापटप सुरक्षा तात्दै देखि। विशेषज्ञहरु चुनिएको Motherboard लागि विशेष विकास थिए शीतलन प्रणाली प्रयोग गर्न सल्लाह। त्यसपछि सबै जुडनार र नल ठ्याक्कै एकै समयमा पर्नु।
हार्ड डिस्क र सामान देखि एक ल्यापटप निर्माण गर्न कसरी समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ आधारभूत तत्व बुझाउँछ तापनि विशेषज्ञ सल्लाह एक कम छन्: राशि र व्यक्तिगत चयन निर्माता। छिटो स्टार्टअप र कार्यक्रम को "उत्तरदायित्व" र सञ्चालन प्रणालीको लागि ठोस-राज्य ड्राइव (SSD) गर्न प्राथमिकता दिन राम्रो छ। तर, मूल्य पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव (HDD) भन्दा धेरै उच्च छ।
यो लगभग सामान देखि ल्यापटप संकलन गर्न कसरी प्रश्न हल गर्दा, निर्देशन उत्पादन स्थान: म्याट्रिक्स। यो Motherboard मा कनेक्टर संग coincides भनेर यसलाई रोजेको हुनुपर्छ। कहिलेकाहीं म्याट्रिक्स त तपाईं खातामा शरीर मा कोष्ठक को स्थिति लिनुपर्छ, एक ढक्कन संग सँगै बेच्न सक्छौं।
विशेष ध्यान प्रदर्शन गरे कि प्रविधि भुक्तान गर्नुपर्छ: तमिलनाडु वा आईपीएस। पहिलो हाल धेरै पुरानो मानिन्छ: गरिब रंग र साना हेर्ने कोण चित्र रमाइलो गर्न अनुमति छैन। आईपीएस, हुनत यो अधिक महंगा छ, तर यो तपाईं आफ्नो मनपर्ने चलचित्र हेर्न सक्षम र टिभीमा कुनै पनि कोणबाट देखाउँछ।
मुख्य नियमहरूको एक शरीर छनौट गर्दा - यसको आकार बराबर वा ठूलो Motherboard को आकार भन्दा हुनुपर्छ। साथै, तपाईँले चयन गर्दा HDMI युएसबी लागि connectors को संख्या, अडियो उत्पादन, आदि ध्यान गर्नुपर्छ ल्याप्टप मामला भविष्य प्रदर्शन को व्यास भन्दा कम हुनु हुँदैन। प्लास्टिक वा धातु: प्रयोगकर्ता पनि खोल को सामाग्री चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
बाँकी घटक धेरै सजिलो चयन गर्नुहोस्। किबोर्ड र टचप्याड समान connectors प्रदान गर्दै छन्, केवल आयाम निर्धारण छ। ब्याट्री को Motherboard वा बराबर, बराबर वा ठूलो क्षमता संग या त लागि डिजाइन, बस चुनिएको। चार्जर आधारमा ब्याट्री उत्पादन मा चयन।
प्रत्येक प्रयोगकर्ता को विकल्प - ड्राइभ वा थप्न। तर, ड्राइव कम र कम प्रयोग गरिन्छ, र खाली ठाउँ वैकल्पिक हार्ड डिस्क अन्तर्गत परिवर्तित गर्न सकिन्छ। वाइफाइ र ब्लुटुथ लागि इन्टरफेस अक्सर motherboard मा सिधै एकीकृत गर्दै छन्, तर यदि, त्यसपछि समस्या सजिलै एडेप्टर को मद्दतले हल गर्न सकिन्छ।
कसरी नेटवर्क केबल मार्फत कम्प्युटरमा आफ्नो ल्यापटप जडान गर्न
ल्यापटप डेल Inspiron 5748
नोटबुक गेमिङ: सबै भन्दा राम्रो को एक समीक्षा
नोटबुक समीक्षा एसस X54H
क्षणमा संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली नोटबुक
नोटबुक समीक्षा एसर Aspire 5742G: विनिर्देशों र समीक्षा
विरोधी भडकाऊ दबाइ "FulFleks": प्रयोगको लागि निर्देश
दबाइ 'Atrovent'। निर्देशन
दैनिक जीवनमा मुड कसरी उचाल्न?
अद्वितीय Louvre जसको चित्रहरु मानिसजातिको सांस्कृतिक सम्पदाको हो,
Buchenwald को फाटक मा लेखिएको: "प्रत्येक आफ्नै लागि"
Silene vulgaris: चिकित्सकीय गुण र आवेदन
Aleksandr Tsekalo - Filmography र व्यक्तिगत जीवन (फोटो)
गर्भावस्था को समयमा ईर्ष्या। कसरी सामना गर्ने?
सर्दी को रोकथाम